Umlingisi ukhuza ibuya kwiMbewu
UPORTIA Ncwane ukhuza ibuya emdlalweni Imbewu lapho edlala khona indawo kaSli Ngwenya Isithombe: SITHUNYELWE
UMLINGISI okhuza ibuya emdlalweni owuchungechunge Imbewu:The Seed uPortia Ncwane, uthe bekunzima ukubuya ngenxa yokushoda kozakwabo.
UPortia (28) owaba yingxenye yalo mdlalo ngo-2018, udlala indawo kaSli Ngwenya.
"Ngithole ucingo lokuthi indawo yami iyabuya. Angifuni ukuqamba amanga, bekunzima ukubuyela ngaphandle kuka-Enhle Gambushe (owashona engozini yemoto ngo-2018) ngoba sasisondelene kakhulu. Bekungathi ngizombona kodwa ke umsebenzi kumele uqhubeke kunzima kunjalo," kusho uPortia oke wadlala kuZalo nasefilimini iLove Lives Here.
Le ntokazi edabuka eNanda kodwa esihlala eNewlands eThekwini, ithe uSli ngumuntu ofuna kuzwakale uma ekhuluma.
"Ufuna inhlonipho, futhi uyazikhulumela. Njengoba manje esebuyile indawo yakhe isondelene kakhulu noKaMadonsela (Brenda Mhlongo), okuyinto ezovivinya ubudlelwano bakhe nomndeni wakwaBhengu. USli uhluke kakhulu kunami kodwa sicishe sifane ngokuthi nami ngiyayimela into yami," kuchaza uPortia.
Uthe ukhuza ibuya kulo mdlalo nje, uke wanyamalala eNingizimu Afrika wayohlala e-United States of America, emuva kokuthola umfundaze weMandela Washington Fellowship for Young African Leaders eNyuvesi yaseDelaware eNewark.
"Bengihamba izindawo njengakoNew York ngisebenza nabezobuciko bakhona. Ngibuye ngonyaka odlule ngenza umdlalo wami ngedwa iThe Journey of Growing Pains ePlayhouse Theatre. Umdlalo ukhuluma ngezinhlungu zokukhula nokujabulela nje impilo."
Le ntokazi ephinde ibe ngumdansi futhi eke yahambela amazwe ahlukene, ithe iyazifela ngobuciko nangokufukula umphakathi njengoba yaqala inhlangano engenzi nzuzo iPortia Ncwane Foundation, esiza kakhulu abantu abasha.
UPortia kulindeleke ukuthi aqale ukubonakala namhlanje kwiMbewu ekhonjiswa ku-e.tv ngo-9.30 ebusuku phakathi nesonto.